Basa Redu - Shijiazhuang Jipeng Import uye Export Co, Ltd.
1. Yakatangwa muna1998, kambani yedu ine nhoroondo refu, iyo shanduko inopfuura makumi maviri emamiriyoni emadhora emadhora. Tine ruzivo rwakakwana rwekushandira vatengi vedu vekunze, kusanganisira chirongwa chekumaneja wepurojekiti kuti tikurukure zvigadzirwa, kubata magwaro etc. Tinogona kupa kwete chete neyakagadzirwa zvigadzirwa, asi tinogonawo kuva OEM inodhinda vekunze vatengi'own brand zita kana logo, uye zvakare inogona kugadzira zvigadzirwa zvakasiyana-siyana kana kukanda zvikamu zvinoenderana neyekunze mutengi dhizaini kana samples.
2. Vatengi vanogona kunakidzwa nekuchinja uye kuita kwakanaka kwezvinhu pano, imwe yemabhenefiti edu ndeyekuunganidza mhando dzakasiyana dzezvinhu mumidziyo imwe izere, vamwe vatengi vedu vanongoda kudarika marudzi mashanu ezvigadzirwa zvenguva imwe. Izvo zvichave zvakanyanya nyore kune vatengi vedu.
3. Yedu yepamusoro kudzora iri rimwe rakakosha basa revatengi vedu.Kutengesa kugadzirwa kana kusati kwaendeswa, hunhu hwedu hwekudzora mhando huchaenda kumafekitori kunomhanyisa kuburitsa uye kutarisa mhando uye mushumo wakanyorwa. Zvinyorwa zvisina kukwana zvicharambwa neyekudzora kwehuhuhu hwedu, isu tichabvunza mugadziri kuti abereke zvakare kana kugadzirisa hunhu hwacho kusvikira iwo akanaka zvakakwana kuti asangane nevatengi vekunze.